Maraykanka iyi Japan oo sheegay in ay ka go’antahay inay si wadajir ah uga hor tagaan china. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maraykanka iyi Japan oo sheegay in ay ka go’antahay inay si...
Maraykanka iyi Japan oo sheegay in ay ka go’antahay inay si wadajir ah uga hor tagaan china.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in isaga iyo Ra’isul Wasaaraha Japan Yoshihide Suga ay ka go’antahay inay si wadajir ah uga wada shaqeeyaan ka hortagga caqabadaha Shiinaha iyo Kuuriyada Woqooyi, kaddib shirkii ugu horreeyay ee Biden uu Aqalka Cad ku martigaliyo hoggaamiye shisheeye.
Biden ayaa suxuufiyiinta u sheeegay kaddib kulankii uu la qaatay Suga inay isla meel dhigeen in dhidibada loo adkeeyo isbaheysiga labada dal, wuxuuna caddeeyay inay ka wada shaqeyn doonaan wajahitaanka caqabadaha ka iman kara China, sida arrimaha badda bariga iyo koofurta China, iyo sidoo kale Kuuriyada Woqooyi.
Madaxweynaha Mareykanku wuxuu ku tilmaamay wadahadalladan inay ahaayeen “kuwo miro dhal ah” wuxuuna sheegay in Mareykanka iyo Japan ay sidoo kale isku raaceen inay ka wada shaqeeyaan sidii loo taageeri lahaa dadaallada tallaalka caalamiga ah ee COVID-19 iyo sidoo kale in sare loo qaado horumarka cusub ee teknolojiyadda, oo ay ka mid yihiin adeegga 5G iyo aalada sirdoonka.
Ra’isul Wasaare Suga waa hogaamiyihii ugu horreeyay ee shisheeye ee wadahadal fool ka fool ah la yeesha Biden tan iyo markii uu xafiiska la wareegay bishii Janaayo.
Intii aan wadahadalku bilaaban jimcihii, Biden wuxuu weriyeyaasha ugu sheegay inuu ku faraxsanyahay inuu Aqalka Cad ku soo dhaweeyo hoggaamiyaha dal uu ugu yeeray ‘Wehel iyo Saaxiib wanaagsan”.
Kahor kulanka labada hoggaamiye, Wasaarada Arrimaha Dibadda ee China ayaa Japan uga digtay arrin ay ugu yeertay “in lagu marin habaabiyo wadamada qaar ee aragtida eexda ah ka qaba Shiinaha.”
Japan waxay martigalisaa qiyaastii 55,000 oo Ciidamada Mareykanka ah, waxayna labada dhinac si joogto ah ugu sifeeyaan isbahaysigooda inuu yahay mid udub dhexaad u ah nabadda iyo xasilloonida Qaaradda Asia.
Previous articleCastro oo iska casilay 50 sani kadib xilkii xoghayaha koowaad ee uu ka hayay xisbiga shuuciga
Next articleGuddiga Kormeerka Facebook oo dib u dhigay go’aanka in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku soo laabto baraha Facebook iyo Instagram.
Madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhaweeyey magaalada Dhuusamareeb
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo wafdi uu horkacayo ayaa goor dhow ka degay Garoonka Diyaaradaha Caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Madaxweynaha Dowladda Galmudug mudane Axmed...
Qaramada Midoobay oo ka digetay macluushii ba’anayd ee dalka Itoobiya...
Wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya oo khudbad uu galabta u...